Izindatshana zikaShafqat Islam Martech Zone
Imibhalo nge Shafqat Islam
UShafqat Islam ungumsunguli nomphathi omkhulu we Welcome, umkhiqizo weNewsCred.
NgoLwesine, ngo-Okthoba 29, 2020 NgoLwesine, ngo-Okthoba 29, 2020 Shafqat Islam
Ezweni lapho ubuchwepheshe budizayinelwe ukusheshisa futhi buhambise inzuzo yamasu, ubuchwepheshe bokumaketha buye eminyakeni edlule, empeleni, benza okuphambene ngqo. Ebhekene nenqwaba yamapulatifomu, amathuluzi, nesoftware ongakhetha kuyo, indawo yezentengiso ididekile futhi iyinkimbinkimbi kunanini ngaphambili, izitaki zobuchwepheshe ziba nzima kakhulu ngosuku. Vele ungabhekanga ukudlula iMartin Quadrants kaGartner noma imibiko yeForrester's Wave; inani lobuchwepheshe obutholakalayo